किन लाग्छ खोकी ? थाहा पाउनुहोस् खोकी लाग्नुको कारण – Recent Nepal News
किन लाग्छ खोकी ? थाहा पाउनुहोस् खोकी लाग्नुको कारण	काठमाडौं –खोकी लाग्नु हामी धेरैमा प्राय देखिरहने स्वास्थ्य समस्या हो । खोकी आफैमा रोग नभएर विभिन्न रोगहरुको सुरुवाती लक्षण हो । खोकीलाई हामीले हल्का रुपले लिने गर्दछौ । तर कतिपय स्थितिमा भने खोकी हाम्रो छातीमा रहेको कुनै ठुलै रोगको लक्षण पनि हुन सक्छ ।
त्यसकारणले खोकीलाई सधै सामान्य रुपमा भने लिनु हुदैन । कसरी लाग्छ खोकी रु श्वासप्रश्वासका केही मांसपेशीहरु खुम्चिनाले यसले यसले छाती भित्रको चाप बढाउँछ र सास फेर्ने नलिमा रहेको ग्लोटिस भनिने ढक्कन खुलाउँछ र हावा द्रूत गतिले बाहिर निस्कन्छ । यसरी मांसपेशी खुम्चाउने काम र छातीको चाप बढाउने काम भने श्वासप्रश्वास सम्बन्धि विभिन्न रोगहरुले गरिरहेका हुन्छन् ।
श्वासप्रश्वासका केही मांसपेशीहरु खुम्चिनाले यसले यसले छाती भित्रको चाप बढाउँछ र सास फेर्ने नलिमा रहेको ग्लोटिस भनिने ढक्कन खुलाउँछ र हावा द्रूत गतिले बाहिर निस्कन्छ । यसरी मांसपेशी खुम्चाउने काम र छातीको चाप बढाउने काम भने श्वासप्रश्वास सम्बन्धि विभिन्न रोगहरुले गरिरहेका हुन्छन् । कुन
कुन रोगमा देखिन्छ खोकी ?
८. केही औषधिहरुको साइड इफेक्ट खोकीका प्रकार
खोकीको उपचार कसरी गर्ने ? खोकीको उपचार भन्दा अघि माथि उल्लेखित जाँचहरु गरेर के कारणले खोकी लागेको हो भन्ने थाहा पाउन जरुरी छ । खोकी दवाउने साधारण दवाइ मात्र खानाले केही समयसम्म खोकी निको भए नि पछि फेरि बल्झिन सक्छ ।
साथै सुख्खा खोकी र खकार आउने खोकीको औषधि पनि फरक हुन्छ । त्यसैले केही दिनसम्म पनि खोकी सन्चो नभएमा के कारणले खोकी लागेको हो पत्ता लगाउन जाँचहरुको निम्ति अस्पतालमा गएर चिकित्सकको सल्लाह अनुसारको औषधि सेवन गर्नुनै बुद्धिमानी हुन्छ ।
Previousकस्ता पुरुष चाहन्छन् महिला ? यी हुन् महिलाले बढी ध्यान दिने विषय
Nextख्याल गर्नुहोस्,यी लक्षण देखिएमा तपाइलाई मस्तिष्क घात हुन सक्छ !